အဆင်သင့်၊ သတ်မှတ်၊ Sky News သည် Inmarsat Global Xpress®ဝန်ဆောင်မှုတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆင်သင့်, သတ်မှတ်, Live! က Sky News, ပထမဦးဆုံး Inmarsat ကို Global Xpress®ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်လွှင့်နေထိုင်ကြသည်။
Cobham Explorer ကို 5075GX နှင့် Sky News, Anchor
ဇန်နဝါရီလ, 2015 - နောက်ဆုံးပေါ်မှတ်တိုင်ဆီသို့လက်လှမ်းမှီ, ဗြိတိန်ရဲ့က Sky News, အောင်မြင်စွာ Inmarsat ရဲ့အသစ် Ka-band ကနေတဆင့်ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ပေါ်တွင်-air ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့် ဂြိုဟ်တု ကွန်ယက်ကို Global Xpress® (GX) ။ Network မှတီထွင် (ni) နဲ့ ပူးပေါင်း. နှင့် Inmarsat, Sky News, စမ်းချောင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ် HD ကုမ္ပဏီမှ GX ကျော်ကဗီဒီယို ဂြိုဟ်တု အဆိုပါ5များအတွက်အေသင်ကနေ (Inmarsat-1 F25) ဘရော့ဘန်းကွန်ယက်ကိုth ဇန်နဝါရီလဂရိရွေးကောက်ပွဲသတင်းလွှမ်းခြုံ။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကအောင်မြင်မှု Inmarsat ဒုတိယကုမ္ပဏီမှ GX လွှတ်တင်မယ့်ရက်ပေါင်းမတိုင်မီလာ ဂြိုဟ်တုတနင်္ဂနွေ5ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်ဓာတ်လှေကား-ပယ်ဘို့စီစဉ်ထား, Inmarsat-2 F1 ။
ကုမ္ပဏီမှ GX ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Ka-band ဝန်ဆောင်မှုထုတ်လွှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ SD ကပေးပို့ဖို့အဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်မည် HD ကမ္ဘာ၏အရှိဆုံးဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမမှီသောဒေသများမှဗီဒီယိုများနှင့်သိသိသာသာသူတို့ရဲ့ပိုကောင်းစေပါတယ် ဂြိုဟ်တု Inmarsat ရဲ့မြင့်မားတဲ့ခရီးဆောင်, ကျောပိုးအိတ်အသံလွှင့် L-တီးဝိုင်း streaming IP ကိုဖြေရှင်းချက် complementing ဘရော့ဘန်းဆက်သွယ်မှု options များ။
"ကျနော်တို့ Ka-band ကို အသုံးပြု. ပြီ ဂြိုဟ်တု flyaway ပစ္စည်းများနှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီကယာဉ်များပေါ်တွင် 2011 ကတည်းက broadband ။ ဒါဟာခရီးဆောင်, ယုံကြည်စိတ်ချရသော IP ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအထဲကလယ်ပြင်၌ရှိသောနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏သမားတွေပေးသညျ။ "ရစ်ချတ် Pattison, Sky News, မှာသတင်းနည်းပညာဒုတိယဝန်ကြီးဦးခေါင်းကပြောပါသည်။ "ဂရိနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကုမ္ပဏီမှ GX ဝန်ဆောင်မှုအမှန်တကယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခြေရာကိုဖြတ်ပြီးလက်သို့အပ်ရလိမ့်မည်ငါတို့သည်ကုမ္ပဏီမှ GX terminal ကိုအတူတူလုပျနိုငျကွောငျးကိုသရုပ်ပြနှင့်တစ်ကြိမ်အပြည့်အဝလည်ပတ်။ က Sky News, တီထွင်ဖို့ချစ်သောသူ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့များအတွက်ကုမ္ပဏီမှ GX ဝန်ဆောင်မှုကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းအနည်းဆုံးခုန်ချ; ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီမှ GX ကျော်ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုanice ဆုကြေးငွေခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါ provider က, ကွန်ယက်တီထွင်ခြင်း, မီဒီယာ, အစိုးရနှင့်ရေကြောင်းဒေါင်လိုက်တစ်ဦးဦးဆောင် Inmarsat မိတ်ဖက်များနှင့် Global Xpress ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးဖြန့်ချိသည်။ "ni မှာကျနော်တို့အထူးသဖြင့် DSNG application များအတွက်ထိုကဲ့သို့သော Inmarsat နဲ့တူက Sky သတင်းနှင့်ကွန်ရက်ကအော်ပရေတာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက clients များနှင့် တွဲဖက်. Ka-band နည်းပညာများကိုတီထွင်ဆက်လက်ပြီ။ " ယောဟနျသ Stoltz, ကွန်ယက်တီထွင်မှာမီဒီယာကဏ္ဍ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "ဒီ Explorer ကို flyaway နှင့်အသစ် Global Xpress ဝန်ဆောင်မှုယုံကြည်စိတ်ချရသော, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဘို့အထုတ်လွှင့် '' စဉ်ဆက်မပြတ်ဝယ်လိုအားများအတွက်နယ်ပယ်ပြည့် non-ဆန့်ကျင်ဘက် ဂြိုဟ်တု တိုက်ရိုက်လွှင့်အဘို့ bandwidth ကိုနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိ-ဆယ်လူလာနည်းပညာတစ်ခုစံပြအဖြည့်ဖြစ်၏။ "
အသစ်ကုမ္ပဏီမှ GX ကွန်ယက်ကို streaming တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအတွက်မြင့်မားတဲ့အာမခံချက် bandwidth ကိုဖြည့်စွက်ဒါပေမယ့်လည်းလောကီသားတို့သည်အမှဖြတ်တောက်-အစွန်း Ka-band ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုမိတ်ဆက်မသာ ဂြိုဟ်တု ဘရော့ဒ်ဘန်း။ ထိုသို့သောကပ်လျက်တည်ရှိ-ဆယ်လူလာကျောပိုးအိတ်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများအဖြစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများအတွက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ်ခြင်း, ကွန်ရက်များကိုမရရှိနိုင်သို့မဟုတ်သိပ်သည်းခြင်းဖြစ်သည့်အခါ '' ဆယ်လူလာ failover '' များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားအော်ပရေတာနှင့်မတူဘဲ Inmarsat ကိုလည်းမီဒီယာစျေးကွက်အတွက် L-တီးဝိုင်းနှင့် Ka-band ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ချောမွေ့စွာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံပေးထားသည်။ ထိုထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်ပါသည် ဂြိုဟ်တု ဖုန်း, ကျောပိုးအိတ် BGAN (HDR) streaming များဆိပ်ကမ်းနှင့် SNG application များအတွက်ယခုခရီးဆောင်ကုမ္ပဏီမှ GX flyaways ။
"ကုမ္ပဏီမှ GX မီဒီယာများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်" မာတင် Turner, မီဒီယာ, Inmarsat လုပ်ငန်းညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ စီးနထေိုငျဖို့ "အဆိုပါစွမ်းရည် HD ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသတင်း-ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပရိသတ်တွေမှအကြောင်းအရာတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသည်နှင့်ကျွန်တော့်လုပ်ဖို့ကမ္ဘာ့မီဒီယာဖွတဲ့ service ကိုကယ်တင်နိုင်မှဂုဏ်ယူပါ၏ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲဝေးလံသောသူတို့၏တည်နေရာ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, အမြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာဖောက်သည်ထူးခြားသောအရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှ GX ကွန်ယက်ကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်ဖြစ်လာသောအခါဆိပ်ကမ်းတစ်ခု suite ကိုကထောက်ခံဤဒေသများအပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ GX ကွန်ယက်ကိုအစောပိုင်း 2015 ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံပေါ်မှာစီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
Network ကိုတီထွင်လာမည့်မှာ, L-band & Ka-band ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အကွာအဝေးပြပါလိမ့်မယ် ဂြိုဟ်တုမတ်လ 2015 ~ 16 နှင့် NAB-19 လူငယ်ကဏ္ဍကနေဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ -2015 ပြပွဲဧပြီလ 13 ~ 16, 2015 ကနေ Las Vegas မှာ, NV အတွက်ပြသပါ။
Network မှတီထွင် (Ni) တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကို enable ပြုလုပ်ဖြေရှင်းချက်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ထောက်ခံမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်ဆက်သွယ်ရေးပေါင်းစပ်။ 1988 အတွက်ထည့်သွင်း, ကွန်ယက်တီထွင်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရုံးခွဲများမှာတည်ရှိပါတယ်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတဆင့်တသမတ်တည်းနဲ့အကျိုးအမြတ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုမီဒီယာ, စွမ်းအင်, ရေကြောင်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရကဏ္ဍများအဘို့အလှည့်-key ကိုဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပို့ဆောင်မှုမှတဆင့်ရောက်လေပြီ။ ထုံးစံဒီဇိုင်းကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ် ဂြိုဟ်တု ဖောက်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ, ဆိတ်ကွယ်ရာယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်။
Inmarsat PLC ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဘိုင်း၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို။ 1979 ကတည်းက Inmarsat ပင်လယ်မှာသို့မဟုတ်လေထုထဲတွင်, မြေယာပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်န်ဆောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူ, အစိုးရများ, လုပ်ငန်းများနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံနဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာဆက်သွယ်ရေးပေးလျက်ရှိသည်။ Inmarsat တိုင်းတိုက်ကြီးအပေါ်စီးပွားကူးသန်း၏အဓိကဆိပ်ကမ်းများနှင့်စင်တာများအတွက်ရှိနေခြင်းနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 1,600 နေရာများတွင် 60 န်ထမ်းတစ်ဝှမ်းလုပ်ကိုင်။ Inmarsat လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း (ISAT.L LSE) တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.inmarsat.com။ အဆိုပါ Inmarsat သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Newsfeed ကိုနှင့်ကော်ပိုရိတ် updates များကိုပေါ်မှာ @InmarsatGlobal ။
ယောနသန်သည် Sinnatt ကေတီ Potts
ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေး Manager ၏ဒါရိုက်တာ
[အီးမေးလျ protected] [အီးမေးလျ protected]
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ 2015-01-30
ယခင်: SSL C10 သည် SHOPPING CHANNEL ၏ HD ထုတ်လုပ်မှုသို့အေ့ဒ်စ်ရောဂါကိုသက်သာစေသည်
နောက်တစ်ခု: Albis Technologies ကချိန်းဆို Access ကို Solutions ၏နယူးဌာနမှူး